I-Humulin 70/30 Isikali
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuhlaziywa nge-30 ka-Okthobha ka-2020.
Igama lesiqhelo: I-insulin yomntu eyi-100 [iU] kwi-1mL
Ifomu yesisindo: inaliti, ukumiswa
Imiyalelo ebalulekileyo yoLawulo
Hlola i-HUMULIN 70/30 ngokubonakalayo ngaphambi kokusetyenziswa. Akufanele iqulethe i-particle mba kwaye kufuneka ibonakale ifu ngokufanayo emva kokuxuba. Sukusebenzisa i-HUMULIN 70/30 ukuba into ebonakalayo iyabonakala. Sukuxuba i-HUMULIN 70/30 kunye nezinye ii-insulins okanye izixube.
I-HUMULIN 70/30 kufuneka ilawulwe ngendlela engaphantsi. Lawula kwizicubu ezingaphantsi zodonga lwesisu, ithanga, ingalo ephezulu, okanye iimpundu. Ukunciphisa umngcipheko we-lipodystrophy, jikeleza indawo yenaliti kuloo mmandla mnye ukusuka kwinaliti enye uye kolandelayo[jonga iimpendulo eziGwenxa (6)].
Sukuyilawula i-HUMULIN 70/30 ngemithambo okanye nge-intramuscularly kwaye musa ukusebenzisa i-HUMULIN 70/30 kwimpompo yokufakwa kwe-insulin.
Yenza umntu ngokobuqu kwaye uhlengahlengise idosi ye-HUMULIN 70/30 ngokusekwe kwiimfuno zomntu zokucutha ukutya, iziphumo zokujonga iswekile yegazi kunye nenjongo yolawulo lwe-glycemic. Uhlengahlengiso lwesilinganiselo lunokufuneka kunye notshintsho kwimisebenzi yomzimba, utshintsho kwiipateni zokutya (okt, umxholo we-macronutrient okanye ixesha lokutya), utshintsho kwi-renal okanye hepatic function okanye ngexesha lokugula kakhulu[jonga Izilumkiso (5.2, 5.3), kunye nokuSebenzisa kuBemi abathile (8.6, 8.7)].
Umlinganiso wokusebenza ngokukhawuleza kunye nokusebenza ixesha elide kwe-insulin kumiswe kwi-insulin engaphambi kwexesha efana ne-HUMULIN 70/30. Uhlengahlengiso oluzimeleyo lwe-basal okanye i-prandial dose ayinakwenzeka xa usebenzisa i-insulin engaphambi kwexesha.
Izinto zomzimba, imeko yesifo kunye neziyobisi ezihambelana nazo zinokuchaphazela ukuqala kunye nexesha lesenzo sazo zonke ii-insulins. I-HUMULIN 70/30 yedosi yeemfuno zinokutshintsha notshintsho kwinqanaba lomsebenzi womzimba, iipateni zokutya (okt, umxholo we-macronutrient okanye ixesha lokutya), ngexesha lokugula okukhulu, okanye ezinye iziyobisi ezilawulwayo[jonga Izilumkiso kunye noKhuseleko (5.3), Unxibelelwano lweziyobisi (7), kunye nokuSebenzisa kubemi abathile (8.6, 8.7)].
Ixesha loLawulo olungaphantsi
I-HUMULIN 70/30 kufuneka inikezwe ngokungxama malunga nemizuzu engama-30-45 ngaphambi kokutya.
zipakisha ngelixa ukhulelwe
uyilungisa njani ikhompyuter yakho
yintoni isiselo somoya
Umjikelo wobomi wenyosi
iselebrex ikhuselekile ekusebenziseni ixesha elide
iziphumo ebezingalindelekanga ze-cream eucerin